Naaf hooqi siin hooqaa taate dubbiin. “Maallaqa miliyoona 72.5 niin WBO kaambii galchuu – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsNaaf hooqi siin hooqaa taate dubbiin. “Maallaqa miliyoona 72.5 niin WBO kaambii galchuu
#Naaf hooqi siin hooqaa taate dubbiin.
Garamitti baha laata? WBO kaambii galchee ficcisiisee maallaqa fudhatamoo, nii dhaba laata? Bullee ilaalla.
Via: Oromia Qeerroo Media
MAALIIF SI JIBBU BEEKTAA??
Ganda wayii keessa iyyeessa mana namaa galuu fi raajii dubbatu tokkotu ture. Gaaftokko “Waaqayyo, iddoo kanatti gooliin ka’ee amantoonni bakka lamatti yeroo caban natti mul’iseera” jedhee waldaa keessatti raajii dubbate. Torban muraasa boodas dubbichi raawwatame.
Kanarratti jaarsoliin Waldaa raajichatti aaranii “situ amantoota keenya bittimse” jechuun tajaajilarraa dhorkan. Kana malees manasaaniitti akka Isa hin simanne, wajjin akka hin kadhannee fi nagaas akkan gaafanne amantootatti beeksisan. Warri cabsatanii ba’animmoo gidduu galanii raajicha fudhachuuf sossobannaan, “Ani waldaa tokko mufachiisee waldaa biraan dhaqu” jedhee dide.
Kanarratti jaarsoliin sun “inni achi deebinaan sabnis duukaa yaa’ee sokka” jedhanii waan sodaataniif Warra inni bira taa’utti isa hadheessanii manaa ariisisan. Utuunni “sababii ani maal yakkeef kun hundi natti dhufe?” jedhee boo’aa deemuus, sagaleen “hin sodaatin! Waa balleessite miti, IDDOON SUN WAAN SIN MADAALLEEF of gidduutti si jibban. Adeemi, seensa magaalattii yeroo geessu cinatti gorii dhaabbadhu” ittiin jedhe.
Iddoo jedhame ga’ee akkuma dhaabbateen dureessa investimentii jalqabuuf bakka biraatti darbaa jiru argee, “Waaqayyo, [ofirra deebi’ii gali malee laficha hin hejjetin, kanaa achi balaatu achitti si argata!] jedheera” ittiin jedhe. Dabalees dhoksaa baayyee mul’ataan argee itti hime. Dureessichimmoo dinqifatee, “Ilaa! Waa lama Waaqayyoon kadhadheen ba’e;
[1. Biyyicha dhaquu koo hin feetu yoo ta’e nama kee ergii nattimi kan jedhu,
2. Waldaan koo <nama Waaqayyoo ittiin hojjetu biyya sanatti yoo argite akka taate ta’ii nuu fidi> waan jedhaniif nama sirrii akka naaf kennu] ture. Kadhati koo lamaanuu deebi’eera. Erganni walitti nu fidee biyya kootti wajjin galla. Baasiin hundinuu ana bira. Kanati gaafattee olittis ani sin gargaara. Adaraa <tole> naa jedhi! ” jedhee kadhate. Raajichi kanarratti dureessicha duukaa gale, biyya sanatti nama guddaa ta’e.
3. Janaraal Kaffaaloo (Ajajaa komaandi poostii Lixaa fi kibba Lixaa)
5. RIB keessaa Qondaalota lama kan maqaa isaanii yeroof hin arganne
Gartuun Kamaal Galchuu kan gandummaa fi naannummaan of ijaaranii #teamkamaal ofiin jedhan kun yeroo ammaatti caasaa fi seera mootummaallee eeganii hojjetaa hin jiran. Ofiin buloodha.
Fakkeenyaaf, Kamaal Galchuu itti waamamni isaa Pirezidaantii Oromiyaaf ta’ee osoo jiruu Lammaa Magarsaaf ajajamaa hin jiru. Dhimmichi MM Abiyyi Bira ga’us innis furmaata itti kennuu hin dandeenye jedhama. Kamaal Galchuu maqaaf itti gaafatamaa dhimma nageenyaa O Oromiyaa haa ta’u malee oolmaa fi hojiin isaa dhimma federaalaa keessa galuun kan Jeneraal Biraanuu Juulaa fi Kaffaaloof karooora akkasii baasaa jiru isadha. Gareen kun naannummaan wal ijaarte waan ta’eef wal-amantaan fi abjuu nutu caalaatiin maraatanii halkanii guyyaa akka hojjetaa turanii fi jiran beekameera.
Hogganoonni ABO amma hidhaa jiran akka hidhaman kan ajaja dabarse Kamaal Galchuu ta’uus keessa beektonni kun saaxilaniiru. Hogganootaa fi miseensota ABO hidhaa jiran irratti gidiraafi hiraarsi (torture) kan wayyaaneen raawwachaa turtee olitti suukaneessaa ta’e raawwatamaa jiras jedhama.
Waanti beekamuu qabu garuu eenyullee shiraa xaxus, hogganootaa, miseensotaa fi deeggartoota ABO hidhus qabsoon Bilisummaa Oromoo itti fufa. WBO’n haa jiraatu. Kan Oromiyaa jaallatu, kan Oromummaan akka hin banne barbaadu hundi daandii argate hundaan WBOtti dabalamuu qaba. Gandummaa fi gosummaan wal ijaartee warra Oromoo diiguu barbaaddu dura dhaabbanna. Yoomiyyuu Oromoon tokko. #teamkamaal diina tokkummaa Oromooti.